UCTU-FTAR: Mitsipaka ny fanapaha-kevitry ny CUA ireo ny fikambanana.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire sept 7, 2017
Manda ny fanapaha-kevitra lany tamin’ny fivorian’ny tsy ara-potoanan’ny filan-kevitra monisipaly Antananarivo renivohitra ny fikambanan’ny fitateram-bahoaka an-drenivohitra (UCTU) sy ny taxi miasa manodidina an’Antananarivo renivohitra (FTAR). “Lavinay ny fanomezana ny fanaovana ny “contre-visite ” ho an’ny orinasa tsy miankina OMAVET”, hoy ny Filohan’ny FTAR, Clémence RAHARINIRINA.
Araka ny fanazavana hatrany, efa tamin’ny volana novambra 2016 no efa naroso tamin’ny fivoriana ara-potoanan’ny mpanolontsaina ny tanana io tetikasa io. Nolanian’ny mpanolontsaina ihany anefa izany amin’izao fotoana izao. “Tsy nangataka ny hevitray akory ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra tamin’izao fanapaha-kevitra izao”, hoy ny Filohan’ny UCTU, Bernadin.
Mitaky ny hanafoanana izany ao anatin’ny roa herinandro ny fikambanana roa tonta satria miteraka fatiantoka ho azy ireo izany. “Voalaza ao anatin’ity fanapaha-kevitra ity fa ora iray no hanaovana ny fitsirihana, aloa mialoha ny saram-piantohana efa-bolana…” Ny fotoana lany amin’ny filaharana, ny fandoavana ny saram-piantohana efa-bolana be izao no hevitra hanohanan’ireto fikambanana ireto ny heviny hanakanana fanomezana ny andraikitra eo amin’ny fitsirihana ny fiara ho an’ny OMAVET.
‹ GSI : Des formations à doubles spécialités.	› MADA JEUNE: Andro faharoa amin’ny « salon des études supérieures » androany.